အန်းဒရွိုက် 7.1 က Universal ကားရေဒီယိုအသံ China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:အန်းဒရွိုက် 7.1 က Universal,ကားတစ်စီးရေဒီယိုအသံ,အန်းဒရွိုက် 7.1 ကားရေဒီယိုအသံ
Home > ထုတ်ကုန်များ > Universal Android Car Dvd > အန်းဒရွိုက် 7.1 က Universal ကားရေဒီယိုအသံ
အန်းဒရွိုက် 7.1 က Universal ကားရေဒီယိုအသံ
ထုပ်ပိုး: 3.5KGS / 40 * 21 * 25.5CM / ဆုကြေးဇူးကို box ကို Set
Supply နိုင်ခြင်း: 3500000pieces/yea
1. ပံ့ပိုးမှုကြေးမုံ Link ကို: အ airpin (PRO) apps များသုံးခြင်းဖြင့်သင်သည် WIFI မှတဆင့်သင့်ရဲ့ iPhone နဲ့ဒီယူနစ်ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး, သင်သည်ဤယူနစ်အပေါ်တစ်ဦး WIFI ဟော့စပေါ့ဖန်တီးဖို့နဲ့ပူဒီ WIFI ရှာဖွေသင့်ရဲ့ iPhone ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်, သင် mirror နိုင်ပါတယ် ထိုကဲ့သို့သော main menu ကို, ဖုန်း / Video, အွန်လိုင်း Navi မြေပုံအဖြစ်ချိတ်ဆက် iPhone display ကိုလင့်ထားသည်။ ကိုယ်ကသာ iPhone 4S /5/ 5C / 5S သို့မဟုတ်ဗားရှင်းအထက်ထောကျပံ့နိုငျနှင့်လွယ်ကူသော-Connect app များကို အသုံးပြု. , သင်သည်ဤယူနစ်များ၏ USB port ကိုနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်ဖို့ cable ကိုအားသွင်းသင်၏ USB အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ သငျသညျ link ကိုထိုကဲ့သို့သော main menu ကို, ဓါတ်ပုံများ / ဗီဒီယိုများ, အွန်လိုင်း Navi မြေပုံအဖြစ်ချိတ်ဆက်ဟာ android smart ဖုန်း Display ကို mirror နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သင်ဤယူနစ်ပေါ်ချိတ်ဆက်ဟာ android စမတ်ဖုန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအများဆုံးဟာ android စမတ်ဖုန်းကိုထောကျပံ့ပေးနိုငျသညျ။
2. မူလကကားဒိုင်ခွက်၏အရောင်အဝါအပြောင်းအလဲအရ, ဒီကုဒ်ဒါနောက်ခံအလင်းတောက်ပ data တွေကို packet ကိုပို့ပေးသည်။ DVD ကိုအိမ်ရှင်ဒေတာ packet ကိုလက်ခံရရှိကြောင်း process လုပ်တယ်, အဲဒီနောက်နောက်ခံအလင်းနှင့် panel ကိုအလင်းအိမ်၏အရောင်အဝါသည်မူလကကားဒိုင်ခွက်၏အရောင်အဝါဖြင့်တရားစွဲဆိုနိုင်ပါတယ်။ ပံ့ပိုးမှုကဘလူးတုသ် 4.0: အဆိုပါဒီဗီဒီကစားသမားလက်အခမဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းစစ်ဆင်ရေးကို enable build-in ကို Bluetooth ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးလာပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကသူတို့ပိုင်ရာအရပ်, စတီယာရင်ဘီးပေါ်တွင်သင်၏လက်၌ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်နှင့်ရှေ့ဆက်လမ်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။
3 ။ အစွမ်းထက်သဟဇာတ protocol ကို: Dual-CANBUS စနစ်။ အတော်များများကကားတစ်စီးပိုင်ရှင်များတိကျတဲ့ကားတစ်စီး DVD ကိုကစားသမားကို install ပြီးနောက်, ဒီစျေးကွက်အတွက်များစွာသောအခြားအမှတ်တံဆိပ်အခုအချိန်မှာမပွုနိုငျရာများစွာကိုမူရင်းကားတစ်စီး၏ဆုံးရှုံးစေလိမ့်မည်ဟုစိုးရိမ်ပူပန်။
မူရင်းကားရဲ့စတီယာရင်ဘီးကိုထိန်းချုပ် function ကိုကျန်ရစ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါဒိုင်ခွက်၏ function ကနျြရစျနိုငျသညျ။
အဆိုပါ standy ပြည်နယ်အတွက်အသံသည်စနစ်၏နိမ့်ဆုံးပါဝါစားသုံးမှုကိုသေချာစေရန်သကဲ့သို့ ACC ထိန်းချုပ်မှုအချက်ပြမှု, standby လုပ်ထားပြည်နယ်ဝင်မှကားစတီရီယိုအိမ်ရှင်် CANBUS ဒေတာစီးကနေထုတ်လွှတ်, ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြည်နယ်မှနိုးထဖြစ်ပါတယ်။ DVD ကိုအညွှန်းအိမ်ရှင်၏ input ကိုအရင်းအမြစ်မူရင်းကားတစ်စီးခရီးစဉ်ကွန်ပျူတာ menu ကနေတဆင့်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ မော်တော်ကားရှေ့မီး: ရသောအခါရှေ့မီးရက်နေ့တွင်, DVD ကိုကစားသမားပေါ်ခလုတ်တစ်ချိန်တည်းမှာပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အန်းဒရွိုက် 7.1 က Universal ကားရေဒီယိုအသံ၏ရုပ်ပုံများ:
စနစ်နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲ parameters များကို:
အန်းဒရွိုက် 7.1:7လက်မ2ဒင် Quad-Core ကားစတီရီယို
quad-core / DDR3 ကို 2GB / 1080p / WIFI / RDS / GPS စနစ် / ကဘလူးတုသ် 4.0 / Touch ကိုမျက်နှာပြင် / 3G
အန်းဒရွိုက် 7.1: 16 GB ကို iNand RAM ကို DDR3 ကို 3GB အတွက် Build
CPU ကို: Rockchip 3188 Cortex A9 ကို Quad-core
Android Market ကို: apps များ၏တထောင်မှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုရယူလိုက်ပါတရားဝင် Android ကိုစျေးကွက်အရပ်ပေါ်မှာဂိမ်းများကို။
APK ကို installer ကို: android အထုပ် installer ကိုထောကျပံ့
2019 ခုနှစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဘို့အဟော့ octa-core ကားတစ်စီးစတီရီယို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက်ရောင်းရန်2din ကားစတီရီယို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အန်းဒရွိုက် 7.1 က Universal ကားတစ်စီးရေဒီယိုအသံ အန်းဒရွိုက် 7.1 ကားရေဒီယိုအသံ အန်းဒရွိုက် 6.0 က Universal အန်းဒရွိုက် 7.1 Prius အန်းဒရွိုက် 6.0 VW တို့က Universal အန်းဒရွိုက် 7.1 ကား DVD အန်းဒရွိုက် 8.1 က Universal ကား Navigation